Faah faahino laga helayo dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo – War La Helaa Talo La Helaa Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/6/c/2/shaaciye.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 316
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal u dhexeeyay Ciidamada Daraawiishta dowlad Goboleedka Galmudug iyo kuwa nabadsugida dowladda Soomaaliya oo Maanta ka dhacay gudaha Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Dagalkaan ayaa ka dambeeyay,kadib markii Sarkaal ka tirsan Galmudug uu isku dayay in uu xoog ku maro wado u xirneyd Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan ,isla markaana waxaa intaasi dib bilowday dagaal xoogan.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalkaas uu ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay.
Inta la xaqiijiyay hal Askari oo ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Galmudug ayaa ku dhintay dagaalka,isla markaana waxaa ku dhaawacmay Saddex Askari oo ka tirsan Ciidanka nabadsugida dowladda Soomaaliya,kuwaasi oo la geeyay Isbitaalka weyn ee Gaalkacyo si xaaladooda Caafimaad loogu dabiibo.
Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Gaalkacyo ayaa waxaa ku waramayaan in haatan xaalada halkaas ka jirto ay tahay mid degan oo aan la maqleyn wax rasaas ah oo ka dhaceysa.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ay uga hadlayaan dagaalkii khasaaaraha geystay ee Maanta ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.